KhunMoung ' s: May 2007
မြန်မာစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အငြင်းပွားခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်တွေ အများကြီးတက်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုပါ။ ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ သင်ကြားလေ့လာခဲ့မှုတွေ ရှိမှာပါ။သွားရောက်ဖတ်ရှုစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အမြင်အရ ခံယူချက်အရတော့ မြန်မာတွေဖတ်တာပဲ ဆိုပြီး ဖြစ်သလိုရေးသား နားလည်ရင်ပြီးရော ရေးတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ပါသလား။ ဂရုစိုက်တာကောင်းပါတယ်။ မြန်မာစာကိုလည်း အလေးထားစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ ဘလော့ဂ်ကို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေရော ဘလော့မဂါတာတွေရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်။ကျွန်တော်ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာတောင် ကြာပါပြီ။ လုပ်ချင်တာတွေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရက်ချိန်းတွေပေး တွေးငေးနေတာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်သေးပါ။ အခုတလော လုပ်မယ်စိတ်ကူးထားတာက ... သွားလည်နေကျ ဘလော့တွေကို ကိုယ့်ဘလော့ကနေပဲ တစုတစည်းထဲ ဖြစ်အောင် လင့်ခ်တွေ ထည့်ဖို့ ။ အဲဒါလည်း မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး ။ ပျင်းနေလို့ ။ပျင်းလက်စနဲ့ ဆက်ပျင်းလိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော့ ဘလော့ဂ်လေးကို လင့်ခ်ချိတ်ချင်တဲ့ ဘလော့ဂါအားလုံး လင့်ခ်ချိတ်နိုင်ပါတယ်။ စီဘောက်စ်လေးမှာပဲ ပြောခဲ့ပါ ။အဲဒီအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ထားပါတယ် ။BlogRolling Tool ပါ။ဒီအဆင့်တွေအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁. Open this link , which will lead you to the login page.
၂. Use (linktoblogroll@gmail.com) as your username.
၃. Use ( linkyourself ) as your password.
၄. Click 'addalink'
၅. Add URL of your blog.
** Please do not abuse that account.
ကျွန်တော့်ရဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ အဓိပ္ပာယ်
ငါ့မှာသာ စက္ကူငှက်တစ်ကောင်လို ဂဏှာမငြိမ်
ငွေကိုတော့ မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက်။
တစ်နေ့ ကဗျာနှစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးလား
ကဗျာခေတ်ကြီး မလာဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ (လှသန်း)
လက္ခဏာပညာရှင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သတ်တဲ့လက်
ခုချိန်ထိ ဘာကိုမှ မိမိရရ မဆုပ်ကိုင်မိသေးတဲ့လက်
လက်ရေးလှလှ ရေးတတ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေမဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်
အဲဒီလက်က အဲ့ဒီလက်ကို လက်တို့ပြီးသတိပေးနေတယ်
အဲဒီလက်က အဲ့ဒီလက်ကို လက်ဖျားခါလိုက်တယ်
တစ်နေ့လက်ချည်းပဲ ပြန်ရမယ်ဆိုတာ သေချာနေတဲ့လက်
အဲဒီလက်က အဲ့ဒီလက်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ (လှသန်း)
မြေကြီးကို ရွှေ့ထားရရင် ကောင်းမလား၊၊
ကျင်းစိမ်ဖို့ ကြိုးစားမိသူ ဂေါက်ရိုက်သမား
ထူးချွန်ဖို့ပဲ လိုအပ်တယ်။ (လှသန်း)
ကဗျာတွေပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူး
OpenSource အင်အားစုများနဲ့ Microsoft တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲမြေပုံ
Трофим - Когда окончится война (When the War Ends)
ကောင်လေးတစ်ယောက် ပေါင်မုန့်ယူရန် ပြေးထွက်လာမယ်
မတည်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုလေးမှာ ဆိတ်ငြိမ်လျှက်ပေါ့
ကံကြမာ အချိန်ယန္တရား
ဟိုးအမြင့်က ကြယ်တာရာတွေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အသံဟာ တိုးတိုးလေးထွက်လာပါတယ်
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဖက်တွေဟာ ဒဏ်ရာတွေကို ကုသကြမယ်
အသစ်ပြန်လည် ဖွံဖြိုးလာတဲ့ နိုင်ငံလေးဟာ အင်အားပြန်လည်တောင့်တင်းလာလိမ့်မယ်
တကယ့်ကို အရေးပါတဲ့ ဘ၀လေးတစ်ခုလဲ အဓိပ္ပယ်ရှိစွာဖြစ်လာမှာပါ
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်လာနိုင်တော့မှာပါ
တစ်ခုတည်းသော ခံယူချက်ကတော့ အကြင်နာတရားပါပဲ
ဒီကမ္ဘာငယ်လေးမှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အကြင်နာတရား ကင်းမဲ့ခဲ့တယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရန်သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ဟာ အစွန့်ပစ်ခံ ကလေးငယ်တွေပါ
ထိုထိုသောအကြောင်းအရာများကို ရေးသား၍ ကျွန်တော့ကို Tag ထားသော Potato နှင့် မြန်မာဘလော့ဂါတို့၏ တက်လောကကြီးကို ရည်စူး၍ ရေးသားပါသည် ...10 Weird Things about Me တဲ့ ...လူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးဖြစ်သည် ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း စဉ်းစားတော့ တော်တော်ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားရတယ် ... ၁၀ ချက်တော့ ပြည့်အောင် ရေးထားပါတယ် ...
(အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် :P)
၁.အရေးတကြီးလုပ်စရာမလိုဟု ယူဆသောအလုပ်များကို အချိန်ဆွဲတတ်သည် ...ရက်ချိန်းပေးတတ်သည် ...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ခဏခဏ ရက်ချိန်းပေးတတ်သည် (နောက်မှလုပ်လည်းရပါတယ် ...ဆိုပြီး)
၂.သီချင်းနားထောင်နေရင်း ...ဂျီတော့ကနေပြီးတော့ စကားပြောဖို့ ခေါ်ရင် တအားစိတ်ဆိုးသည် ...မည်သူနဲ့မှ ပြန်မပြောပါ(ကြိုပြောထားတာ....ဟီး)
၃.ကွန်ပျူတာရှေ့ တစ်နေကုန်နှင့်တစ်ညလုံးထိုင်နိုင်သည် ...စာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင် ...၁၀မိနစ်လောက်ဖတ်ပြီး ...ငါ့မျက်စိတွေသိပ်မကောင်းတော့ဘူး ...စာသိပ်မဖတ်နိုင်တော့ဘူး..လို့ ညည်းတတ်သည်.
၄.ကိုယ်တိုင်က ပုဆိုးချက်ပြုတ် ၀တ်တတ်သော်လည်း တခြား ပုဆိုးချက်ပြုတ်ဝတ်ထားသူတွေဆို ... ကြည့်လို့မရဘူး ...Cross ပဲ မျက်စိထဲမှာ ...
၅.သိပ်မရင်နှီးသောသူများနဲ့ဆို တကယ့်ကိုရုပ်တည်ကြီးနေတတ်သည် ...နောက်တော့ပေါတောတောကြီး
၆.သေရည်သောက်၍ နည်းနည်းလေးမူးလာရင် စကားသိပ်မပြောတော့ဘူး ...ခံစားချက်တစ်ခုခုကို အစဖော်စဉ်းစားတတ်တယ် ...ဒီထက် နည်းနည်းလေးပိုမူးရင် မှောက်သွားရော ...
၇.ဂျီတော့ custom message တချို့ မျက်စိထဲ cross ဖြစ်တယ်...ဘယ်သူ့ကိုရည်စူးထားတဲ့ စာသားတွေလည်းမသိဘူး...ခံစားချက်ကြော်ငြာတွေကို ပြောတာပါ(ဒါပေမယ့်သူလည်းသူ့ Privacy နဲ့သူပဲ)
၈.ပိုးဟပ်အကောင်သေးသေးလေးတွေ တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရွံကြောက်သွားသည်.
၉.ခေါင်းအလွန်မာသည် (သက်သေတော့ပြတော့ပါဘူး ...ဟီး)
၁၀.ငပိရည်ကောင်းကောင်း တို့စရာကောင်းကောင်းကြိုက်သည် ...(Weird ဖြစ်တယ်မထင်ဘူးလားဗျ)(၀ိုင်းသြဘာပေးတော့မှာပဲ)